Iyo Pokémon Go yekuvandudza yave kuwanikwa kune iOS | IPhone nhau
Iyo Pokémon Go inogadziridza ikozvino yave kuwanikwa yeIOS
La nyowani vhezheni yePokémon Go 1.37.1 Ikozvino yave kuwanikwa kune vashandisi veIOS nekunatsurudzwa kwakasiyana kwakaitwa runyerekupe mazuva mashoma apfuura uye kuti Niantic yakazopedzisira yazivisa pane yavo yepamutemo Twitter account. Pakati peichi gadziriso paive nesarudzo yekurwira muTimu Gyms, asi tinodemba kuzivisa kuti izvi hazviwanikwe mune ino gadziriso nhasi. Isu tanga tichichiyedza kwemaminetsi mashoma uye mutambo uchiramba uchiratidza maGyms ari kuvakwa, saka isu tichafanirwa kumirira kuti tione kana iyi sarudzo yakazogoneswa mumaawa mashoma anotevera kana isu tinofanirwa kumirira vhezheni itsva.
Kune rimwe divi, mune yekuvandudza manotsi ivo ivo vanotaura nezve kuvandudzwa kwakazara kweiyo yekukurudzira system, nyowani Gym Medal basa uye nePush ziviso system mune kunyorera maGyms, asi hazvo, kana izvi zvisiri kushanda saka hatigone kuyedza idzi nhau pamwe nenhau dziri muRaids. Iyo nyaya yeiyo Incursions (iyo inondiudza pachayo kuti ini handina kukwana zvakakwana) inogona kuonekwa mune iri pedyo Pokémon tab uye ivo vachatipa isu nyowani yemushandirapamwe ruzivo kune mushandisi sezvo ivo vasinga ganhurirwe kune vatambi vechikwata asi chero mutambi anogona kujoina , zvinhu zvina zvitsva zvinowedzerwa nekungopedza Raids, isu tinazvo sekutaura kweRaids tab kune iripedyo Pokémon skrini pamwe nechiratidzo chekuona kune vasina kushanyirwa Poképaradas.
Chero zvazvingaitika, iko kugadziridzwa kwakaitwa hakusi kushanda nekuda kweGyms kana izvo ndizvo zvinoitika kwandiri pachezvangu. Zvirokwazvo munguva pfupi iri kutevera zvinhu zvese zvinoitwa uye zvinotanga kushanda zvakajairika. Kubva kuNiantic ivo vanoda kupa iwo mutambo weakawedzera chokwadi hupenyu hutsva izvozvi zhizha riri kuuya uye nekuvandudza uku vashandisi vazhinji vanogona kutamba zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Iyo Pokémon Go inogadziridza ikozvino yave kuwanikwa yeIOS
Chechina beta yeIOS 10.3.3 yevagadziri yava kuwanikwa
Kufungidzira Technologies kunoisa iyo Yekutengesa chiratidzo